बिहे पछि किन बढ्छ महिलाको हिप ? | NepalDut
सामान्य त हाम्रो समाजले पुरुष र महिलाबीच हुने बैवाहिक सम्बन्ध पछि मात्रै शारिरीक रुपमा परिवर्तन भएको स्विकार गर्छ । कतिपय महिला र पूरुषहरु हर्मोन र वंशाणुगत गूणको कारण पनि शारिरीक रुपमा परिवर्तन हुने गर्दछन् ।
विहेअघिको शारिरीक परिवर्तनलाई शंकाको रुपमा लिन नहुने चिकित्सकहरु बताउछन् । मानिसको जीवनमा यौन सम्पर्क अपरिहार्य नभएपनि आवश्य चाँहि हो । बिवाह पछि मानिस नयाँ जिन्दगी सुरु हुन्छ ।
विशेष गरि बिहे पछि महिलाको जिन्दगीमा धेरै परिवर्तन आउँछ । उनीहरुको बोली चाली देखि हरेक कुरामा परिवर्तन आउँछ । पुरै जिन्दगी बद्लिन्छ र यो समायोजन गर्न अलि समय पनि लाग्छ ।
साथै उनीहरुको शरीरमा पनि परिवर्तन देखिन्छ । आखिर बिहेपछी किन यस्तो हुन्छ ? उनीहरुको हिप किन फुल्छ ? प्राय केटाहरुलाइ जान्ने जिज्ञासा नै यहि हो ।
एक अध्यनका अनुसार महिलाहरूमा आउने परिवर्तनको कारण खुल्न आएको छ र यो सुनेर तपाइँको होश उड्छ । यो सर्वे युनिभर्सिटी अफ लिड्स का सोधकर्ताले गरेका थिए ।
यो सर्वेका लागि महिलाहरुको हिपको सबै भन्दा ठुलो भाग र कमरको सबै भन्दा पातलो भागको नाप लिइयो । यसबाट के पत्ता लाग्यो भने जुन केटिहरुले एक दिनमै पटक पटक यौन सम्बन्ध राखे उनीहरुको हिपको आकार अरु महिलाको भन्दा बढी थियो ।
यो पनि थाहा भयो कि जुन महिलाको कम्मर पातलो हुन्छ उनिहरु बच्चालाई सजिलै जन्म दिन सक्छन् । जसको हिप ठुलो छ उनिहरुलाइ गर्भवती हुदा खासै समस्या नहुने बताइएको थियो ।